China 6m akatungamirira MOBILE TRUCK - Foton Aumark fekitari uye vagadziri | JCT
JCT 6m akatungamirira MOBILE TRUCK - Foton Aumark（Muenzaniso:: E-W3360）inogadziriswa neFoton Aumark chassis uye LED yekunze yakazara-ruvara simba-yekuchengetedza skrini. Rori muviri weE-W3360 LED MOBILE TRUCK iri pasi pemamita matanhatu, inogona kupihwa marezenisi uye kutyairwa. Mushure mekugadzirwa kwechassis yemotokari diki yakanyoreswa uye kupihwa rezinesi, inogona kufamba zvakasununguka muguta isina kukanganiswa nemugwagwa uye kuvharika kwemugwagwa. Jingchuan E-W3360 LED MOBILE TRUCK yakagadzirirwa multimedia playback system, inotsigira U disk playback, uye inotsigira yakanyanya fomati yevhidhiyo. Yakave yekushambadza terminal inogona kufamba zvakasununguka, shandura ruzivo, nzira dzekutaurirana nenzvimbo chero nguva. Inoita basa rakakosha mukusimudzira chigadzirwa uye inokwezva vatengi. Icho chitsva chekushambadzira chekutaurirana chinotakura chinosanganisa kushambadzira, kuburitswa kwemashoko, uye kutepfenyurwa kwepamoyo. Ndiyo yekutanga sarudzo yevashandisi kusimudzira.
Diki uye yakaomesesa, asi isiri nyore
Kunyangwe chassis diki uye diki diki chassis ichigamuchirwa, 100% yemapuratifomu mapuratifomu akagarwa nhaka kubva kune hombe rori: 6.2m2 LED yakazara yakazara skrini, imwechete tsvuku strip skrini, roller light bhokisi, inochinjika uye nyore.
Kugadziridza kwebasa kwakatarisana nevanhu
6m LED MOBILE TRUCK inotora nyowani yakavakirwa-mukati midhiya optimization control system, iri nyore kwazvo kugadzirisa nekushanda; Yakavhurika pamusuwo wedivi, manera anotakurika uye mamwe magadzirirwo akagadzirwa nevanhu, pamwe nekugadzwa kwemagetsi sisitimu, zviite zvinonzwisisika uye zvakachengeteka, zvirinyore kushandisa.
Pazai kutonga, Guta rakatsaurirwa
Mushure mekugadzirwa kwechassis yemotokari diki yakanyoreswa uye kupihwa rezinesi, inogona kufamba zvakasununguka muguta isina kukanganiswa nemugwagwa uye kuvharika kwemugwagwa. Iyo inonyatsoziva iyo inoshambadzira inoshambadzira uye inoenda yakadzika mukona yega yega yeguta.
Eu standard, yakaderera kabhoni kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza
Zvinoenderana nematanho epasi rose, iyo chassis yerori inosangana neEuro EuroⅤ / Euro standards emission zviyero inogamuchirwa zvakaenzana, izvo zvinogona kuchengetedza simba, kudzikisa kubuda, uye kudzora kurambidzwa kwezvakatipoteredza.
Parameter Specification (mureza)
1.Saizi yakazara: 5995 * 2190 * 3300mm
2. LED yekunze yakazara-mavara kuratidza skrini (P6) saizi: 3520 * 1920mm
3. Kurudyi kwekunze imwe tsvuku inoratidza skrini (P10) saizi: 3520 * 320mm
4. Kumashure imwe tsvuku yekunze inoratidzira skrini (P10) saizi: 1280 * 1440mm
5. Yakashongedzerwa nedhijitari roller system, inogona kutamba 1-4 static kushambadzira mifananidzo mune chiuno.
6. Simba rekushandisa (avhareji yekushandisa): 0.3 / m / H, huwandu hwepakati hwekushandisa.
7. Yakashongedzerwa nepamberi-kumagumo vhidhiyo yekugadzirisa sisitimu yekutepfenyura mhenyu kana rebroadcast nemitambo yebhora, kune masere masere, uye iyo skrini inogona kuchinjiswa pamadiro.
8. Iyo yakangwara nguva simba pane system inogona kuvhura kana kudzima iyo LED skrini.
9, yakashongedzerwa ne multimedia playback system, tsigira U dhisiki yekutamba, tsigira yakanyanya vhidhiyo fomati.
10. Yakashongedzerwa ne-Ultra-yakanyarara jenareta seti, simba 8KW.
11. Input voltage ndeye 220V, kutanga ikozvino 25A.
E-W3360（6m akatungamirira MOBILE TRUCK-Foton Aumark）
Brand Fonton Aumark Kunze Kwekunze 5995mm * 2190mm * 3300mm
Simba Cummins Huremu hwese 4495KG
Emission Standard EuroⅤ / Euro Ⅵ Kurema kwehuremu 4250KG
Saizi yekukura 3200 * 1920mm Dot Pitch P3 / P4 / P5 / P6
Akatungamirira bhaa chinovhara
Rutivi rwakatungamirwa Screen Saizi 3200mm * 320mm Kumashure kwakatungamira Screen Saizi 1280mm * 1440mm
Dot Pitch 10 mm Kupenya ≥5000cd / m²
Roller mwenje bhokisi
Saizi yeCanvas 3100mm * 1500mm Roller Dhayamita 75 mm
Nhamba yesepombi Mvura-yakanyorova mukati mutsetse 4-humburumbira
Avhareji yesimba rekushandisa
Monitor Tsigira 8-nzira yekuisa chiratidzo
Media mutambi nemhando dzakasiyana siyana dzinowanzo shandiswa vhidhiyo yekubatanidza, dzivepo kune PC, kamera uye nezvimwe.
Pashure: JCT 9.6M LED STAGE TRUCK-Foton Aumark
Zvadaro: 6m akatungamirira MOBILE TRUCK-Nanjing YueJin
Akatungamira Nhare Yekutengesa, Mobile Yakatungamira Kushambadzira Rori, Nhare Yakatungamirwa Billboard Rori, Akatungamirira Mobile Rori, Akatungamira Mobile Trailer, Mobile Yakatungamira Screen Rori,